view source ပိတ်ချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
မူလ › Web Development
view source ပိတ်ချင်လို့ပါ
July 2011 edited July 2011 in Web Development
အကိုတို့ရေ webpage တစ်ခုကို view source ကြည့်လို့မရအောင် ဘယ်လိုပိတ်သလဲ ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် မြင်ဖူးတဲ့ Page တစ်ခုဆိုရင် Right click တောင် နှိပ်လို့မရပါဘူး။ It is not allow in this page ဆိုပြီးတော့ပဲပြနေတယ်။ developer tool နဲ့လဲ view source ကြည့်လို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒါလေး သိချင်လို့ပါ။
July 2011 Administrators
You can get the code like this in google search.
If you are using chrome , go to the View > Developer > Page Source or View > Developer > Developer Tool
July 2011 Moderators
encryption can be done . click <a href="http://www.mysteryzillion.org/discussion/10468/how-to-hack-and-view-the-page-sources">here</a>; to see the other discussion
June 2012 Registered Users
မဖြစ်နိူင်ဘူးထင်တယ်၊view source ကြည့်မရတာ ဘယ် url လဲဗျာ။ right click ကိုတော့ JS နဲ့ ဖမ်းထိမ်လို့ရပါတယ်။